Chicasaw SEBTC | JPMA, Inc
နွေရာသီ EBT အကြံပြုချက်
အဆိုပါအကြံပြုချက်နှင့်အတူအောက်ပါသင့်ရဲ့နွေရာသီ EBT packet ကိုတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်:
အကျိုးခံစားခွင့်ကဒ်: အ 2021 အကျိုးအတွက်ကာလအတွက်သုံးစွဲဖို့ EBT ကဒ်
အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အစနှင့်အဆုံးရက်။ အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
အစားအစာကဒ် - USDA အစာအာဟာရပညာရှင်များရွေးချယ်ထားသောအတည်ပြုထားသောအစားအစာစာရင်း။
WICShopper app flyer - Shopper app ကိုသင်၏လက်ကျန်ငွေကိုစစ်ဆေးရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတည်ပြုပြီး၊ သင်၏လက်ကျန်ငွေပမာဏတွင်စတိုးဆိုင်နေရာများနှင့်အခြားအရာများကိုရှာဖွေရန်အတွက်စတိုးတွင်ရှိစဉ်ဘားကုဒ်များကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Store စာရင်း - နွေရာသီ EBT အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အတည်ပြုထားသောကုန်စုံဆိုင်များစာရင်း။
သင်လစဉ်လတိုင်းအကြိမ်များစွာ ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်သည်အစားအစာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်း ၀ ယ်ရန်မလိုပါ။
သငျသညျနွေရာသီ EBT နှင့်အတူပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ကိုပြောပြပါနှင့်သင့်ကဒ်ပြသပါ။
ညွှန်ကြားသည့်အခါ, သင့်ကဒ်ပွတ်ဆွဲနှင့်သင့် PIN ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အတည်ပြုပြီးနှင့်သင့်မှန်သောချိန်ခွင်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်အစားအစာများနွေရာသီ EBT ကပေးဆောင်ရလိမ့်မည်နှင့်သင့်ချိန်ခွင်လျှာကနေဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရောင်းအတည်ပြုရှေ့မှာမခံမသင့်လက်ကျန်ငွေအတွက်အတည်ပြုစာရင်းကိုသို့မဟုတ်မအပေါ်အစားအစာများကိုငွေရှင်းကောင်တာတွင်နေဖြင့်လက်မှတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်သင်ငွေပေးချေ၏အခြားပုံစံတွေနဲ့သူတို့အဘို့အပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
သငျသညျ WIC ခံယူထားလျှင်, သင်သည်သင်၏ WIC ကဒ်နှင့်သင့် SEBTC ကဒ်အတူတူပင်ငွေပေးငွေယူအတွက်အသုံးမနိုင်။
Chickasaw Nation SEBTC သို့ခေါ်ဆိုပါ (580) 272-1178 or (844) 256-3467 (နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီ၊ တနင်္လာနေ့မှသောကြာအထိ) သို့ -
သင့်ရဲ့လိပ်စာနှင့် / သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
စျေးဝယ်ခြင်းပြproblemနာကိုသတင်းပို့ပါ (ဖြစ်နိုင်လျှင်စတိုး၌ရှိနေစဉ်ခေါ်ဆိုပါ) နာရီများသို့မဟုတ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ဖြစ်လျှင်၊ နောက်လာမည့်စီးပွားရေးနေ့၌ဖုန်းလက်ခံရရှိမှု၊ မှတ်ပုံတင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမှားသို့မဟုတ်သင်မ ၀ ယ်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုခေါ်ပါ။
EBT ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်းကိုသုံးပါ (866) 358-8767 သို့မဟုတ် MyEBTbalanc.com သို့:
စျေးဝယ်ရှေ့တော်၌ PIN ကို Set (မေတ္တာရပ်ခံတဲ့အခါမှာအသက်အကြီးဆုံးကျောင်းနေအရွယ်ကလေး၏မွေးနေ့ကိုသုံးပါ) ။
သင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကို Check (လည်းကုန်စုံလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့် WICShopper app ကိုအပေါ်ပြသ) ။
EBT Consejos útiles de verano
EBT de verano ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း:
အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ - ၂၀၂၀ တွင် EBT ၏အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်ရှိသူများ
စာရင်း de compras que muestra:
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုကြည့်ရှုရန်။ Todos los beneficios se vencenala
medianoche del 14 က de စက်တင်ဘာက de 2021 ။
နောက်တော်သို့လိုက် Shopper: puede usar la aplicación Shopper မှ ver verificar su saldo, escanear los códigos de Barra mientras está en la tienda para verificar si un ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်တင်ဘာလအတွင်းနှင့်က y, ကိန်းဂဏန်းများသည် las tiendas ။
စာရင်းသည် - supermercados စာရင်းအား EBT de verano အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
Puede comprar varias veces cada mes; အဘယ်သူမျှမ tiene que comprar toda la comida de una vez ။
နွေရာသီ EBT y muestre su tarjeta အတွက်စကားပြော။
သင်၏ PIN နံပါတ်သည် pidan, pase su tarjeta y ponga su PIN ဖြစ်သည်။
EBT de verano y se descontarán de su saldo ။ သင့်အနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစာရင်းပြုစုထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။
WIC ကိုအသုံးပြုပြီး SEBTC မှမှားယွင်းသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Llame တစ် SEBTC က de Chickasaw Nation al (580) 272-1178 သို့မဟုတ် (844) 256-3467 (နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီ)
အခက်အခဲပြcompနာများကိုအစီရင်ခံပါ (llame mientras este en la tienda, si es posible) ။ ဓာတ်ပုံများအနေဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ အမှားအယွင်းများသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာပြo္ဌာန်းချက်များအပြည့်အ ၀ မပါ ၀ င်ပါ။
Hacer más preguntas sobre el programa ။
EBT ကိုအသုံးပြုပါ။ (866) 358-8767, o MyEBTbalance.com para:
PIN နံပါတ်နှင့်ပါ ၀ င်သည်ကို configure လုပ်ပါ။ (edad escolar cuando se le pida ကိုအသုံးပြုပါ။ )
Verperar su saldo (စျေးဝယ်သူနှင့်ဆိုင်သောအချက်အလက်များနှင့်ဈေးဝယ်သူများ) ။
အဆိုပါ Chickasaw အဘိဓါန် Nation SEBTC အခွင့်အာဏာအစားအစာစာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကိုကလစ်နှိပ်ပါ
နွေရာသီ EBT မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
မေ ၁ ရက် - စက်တင်ဘာ ၁၄
ဇွန် ၁ - စက်တင်ဘာ ၁၄
ဇူလိုင်လ ၁ ရက် - စက်တင်ဘာ ၁၄
အသုံးမပြုသည့်အကျိုးခံစားခွင့်များသည်လစဉ်လတိုင်းရုတ်သိမ်းပြီးစက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်ညသန်းခေါင်စာရင်းတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်။
Q: ကျွန်ုပ်သည်နွေရာသီ EBT ကဒ်ပြားကိုကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
A: Summer EBT ကတ်ကိုသင်သုံးနိုင်သည့်နွေရာသီ EBT မှအတည်ပြုပြီးသော Walmart စတိုးဆိုင်များတွင်ကိုယ်တိုင်ငွေရှင်း။ ရနိုင်ပါသည်။
ကဒ်နှစ်မျိုးလုံးကိုသုံးလျှင်နွေရာသီ EBT အစားအစာများကို WIC အစားအစာများနှင့်သီးခြားခွဲထားပါ။ နွေရာသီ EBT နှင့် WIC တို့ကိုငွေပေးချေမှုတစ်ခုတည်းတွင်မသုံးနိုင်ပါ။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု EBT သည်အစားအစာများကိုအတည်ပြုသည်။
Summer EBT ကတ်ကိုပွတ်ဆွဲပြီးငွေရှင်းရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Q: အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏နွေရာသီ EBT ကဒ်ကိုသုံးလို့ရပါသလား
A: ဟုတ်ကဲ့၊ သင်၏ Summer EBT ကဒ်ကို Inon store အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်အတူ SoonerFoods.com အွန်လိုင်းကုန်စုံမှာယူမှုရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြု၍ Sooner Grocery စတိုးများနှင့်အွန်လိုင်းတွင်စျေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ဟန်ချက်အတွက်ကို item ၏အလုံအလောက်ရှိသည်မဟုတ်ပေမည်။
ထိုပစ္စည်းအတွက်သင်ငွေပေးချေရန် (သို့) ငွေရှင်းရန်ငွေရှင်းရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသို့ကျွန်ုပ်တို့အစီရင်ခံနိုင်သည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် UPC နှင့်တံဆိပ်၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပါသို့မဟုတ် UPC၊ တံဆိပ်နှင့်အထုပ်အရွယ်အစားကိုချရေးပါ။ နွေရာသီ EBT ရုံးသို့သင်ခေါ်ဆိုနိုင်သည် (580) 272-1178 or (844) 256-3467 စတိုးဆိုင်၌ရှိနေစဉ် (နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီတနင်္လာနေ့မှသောကြာအထိ) ။
သင်အတည်ပြုထားသောအစားအစာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏လက်ကျန်ငွေဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန် Summer EBT Shopper အက်ပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
A: နွေရာသီ EBT အကျိုးကျေးဇူးများသည်လစဉ်လတိုင်းပျံ့နှံ့သွားသည်။ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်ညအထိသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
Q: နွေရာသီ EBT ဖြင့် ၂% သို့မဟုတ်နို့လုံးရနိုင်ပါသလား။
A: မဟုတ်ပါ၊ နွေရာသီ EBT ကဒ်များကိုနို့လုံးသို့မဟုတ် ၂% နို့ကို ၀ ယ်ရန်မသုံးနိုင်ပါ။ နွေရာသီ EBT သည်အဆီနည်းသော (၁% သို့မဟုတ်½%)၊ အဆီများသော (skim) နို့နှင့်ထောပတ်နို့များကိုခွင့်ပြုသည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအဆီတစ်မျိုးလုံးသို့မဟုတ်လျှော့ချထားသောအဆီ (2%) ကိုအဆီနည်းသောနို့နှင့်ရောစပ်ပါ။ ဤအရာသည်သင်၏ကလေးများအတွက်အရသာအသစ်ကိုကျင့်သုံးရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အဆီနည်းသောနို့ကိုသာသုံးပါ။
Q: ကျွန်ုပ်ကလေးသည် Lactose ကိုသည်းမခံပါ။ အခြားနို့သောက်စရာများရှိပါသလား
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ နွေရာသီ EBT ကဒ်ဖြင့်သင် lactose free milk ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအဆီအခမဲ့သို့မဟုတ်အနိမ့်အဆီဖြစ်ရမည်။
မေး။ ။ နို့မတိုက်ခင်ငါ့မိသားစုကနို့လုံးကိုမသောက်နိုင်ဘူး။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့တဲ့နို့ (အမှုန့်နို့) အဖြစ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတည်ငြိမ်နို့ရွေးချယ်စရာလည်းဖြစ်ကြပြီးနို့ (စည်သွတ်နို့) အငွေ့ပြန်။
Q: ကျွန်တော့်မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒိန်ခဲ ၂ ပေါင်လောက်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရ?
A: ဒိန်ခဲကို ၁ ပေါင် (၁၆ အောင်စ) အထုပ်ဖြင့်သာဝယ်ရမည်။ သင့်တွင်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါက ၁ ပေါင် (၁၆ အောင်စ) ရှိသော ၂ ခုကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
Q: ၈ အောင်စရှိတယ်။ အချို့သောသီးနှံများသည်ကျွန်ုပ်အကျိုးခံစားခွင့်များကျန်ရှိနေသော်လည်း ၈ အောင်စမဝယ်နိုင်ပါ။ သတျတော။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
A: ကောက်ပဲသီးနှံများကို ၀ ယ်ယူသောအခါ၊ ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းသည်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုအသုံးချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုများမပြုလုပ်မီ၊ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များမှအကျိုးအပြည့်အ ၀ ရရှိစေရန်သေချာစေရန်သင်၏သေတ္တာများစုစုပေါင်းကိုထည့်ပါ။
ကလေးတစ် ဦး ချင်းစီကို ၁၈ အောင်စထုတ်ပေးသည်။ လစဉ်သီးနှံ၏။ သင် ၁၁.၈ အောင်စမှကောက်နှံသေတ္တာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ 18 အောင်စရန်။ သင်ပထမလမှကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေရှိလျှင်ဒုတိယလအတွက်သင်၏လက်ကျန်ငွေကိုထပ်ဖြည့်လိမ့်မည်။ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုစက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်ညသန်းခေါင်ယံတွင်ကုန်ဆုံးမည်။
PREGUNTAS SOBRE EL သီးခြားစီ
အစီအစဉ် DE EBT DE VERANO
P: ánCuándo puedo comprar comida?
Del 1 က de Mayo အယ်လ် 14 က de စက်တင်ဘာ
စက်တင်ဘာ 1 က de junio အယ်လ် 14 က de စက်တင်ဘာ
Del 1 က de Julio အယ်လ် 14 က de စက်တင်ဘာ
စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်မှ စ၍ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူသူများအနေဖြင့်မည်သည့်အသုံးအနှုန်းမှမသုံးစွဲနိုင်ပါ။
P: E EBT de verano en las cajas de automático?
R: EBT de verano en EBT de verano en automático en las tiendas Walmart aprobadas por el EBT de verano ၏အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ။
WIC မှ EBT ၏ verano de la comida aprobada မှဤသည်ကိုအသုံးပြုသည်။ EBT မှ verano y WIC နှင့်မှားယွင်းသောအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်သည်။
El EBT de verano မှထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။
EBT မှ verano y siga las instrucciones en la pantalla para pagar ။
P: E EBT သည်ဤမျှလောက်စွမ်းရည်ပြည့်ဝသလား?
R: EBT ၏ verano သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သည့်မကြာမီကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် SoonerFoods.com ၏အပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ။
P: mi ဤသည်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
R: Marca incorrecta ပင်လယ်ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များမှဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော။
pedirle al cajero que lo anule ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတစ် ဦး မှသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ UPC သည် UPC နှင့်ဓာတ်ပုံများကို UPC ၏ပုံသဏ္aာန်နှင့်ပုံတူကူးခြင်းဖြစ်သည်။ Puede llamarala oficina de EBT de verano al (580) 272-1178 o al (844) 256-3467 (နံနက် ၈ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် de lunesaviernes) ။
နွေရာသီ EBT စျေး ၀ ယ်သူသည်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။
R: Ahora, EBT ၏အကျိုးခံစားခွင့်များအရ arrastran cada mes ။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့်မည်သည့်အချက်ကိုမျှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိသေးပါ။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ un un mes mes ဝါသနာပါရှိသည်။
barrea ။ ။ .bar ။ ။ ။ bar ။ ။ bar ။ barrob rea
P ကို: ¿ Puedo recibir leche entera ဏ al 2% con EBT က de verano?
R: မဟုတ်ဘူး၊ EBT သည်မှန်ကန်မှုမရှိသော ၂% သာရှိသည်။ EBT ၏ခွင့်ပြုချက်သည် leche semidescremada (အယ်လ် ၁% မှ ၀.၅%)၊ leche descremada y buttermilk ။
Comprendemos que algunas personas no están acostumbradas al la sabor de la leche semidescremada ။
sumese su su su su su su su ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ su ။ ။
Baja en grasa (al 2%) သည်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော semidescremada durante algunos días။ Esto ayudaráaque sus hijos se acostumbren al nuevo sabor ။ Después de unos días, trate de usar únicamente la leche semidescremada ။
P: Mi hijo es intoleranteala lactosa ။ ¿ Hay otras opciones de leche?
R: EBT de verano ၏စာရွက်စာတမ်းများ။
Debe ser descremada o baja en grasa ။
R: Si tiene espacio en el congelador, la leche se puede congelar ။
အပူအအေးဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်အပူချိန်လျှော့ချခြင်း (en polvo) y la leche evaporada (en lata) ။
P: တန်ပြန်မေးခွန်းများနှင့်မေးခွန်းများအတွက်ပါ ၀ င်သည်။
lo Por me qué me lo negaron?
R: မေးခွန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ (၁၆ အောင်စ) ။
ဤအမှုန့်များသည် ၁၆ နာရီအောင်နိုင်သည်။
caja က de 8 အောင်စ။ ¿Qué puedo hacer?
R: Cuando compre cereal, la mejor forma de aprovechar todos sus susosos to preparase con tiempo ။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသည်စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေစုစုပေါင်း၏စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။
18 oz de cereal cada mes autorizan တစ် ဦး က။ Puede comprar cajas de သီးနှံက de 11.8 oz hasta 36 အောင်စ။ သင်တို့၏အကျိုးခံစားခွင့်သည်သင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိသည်။
P: 16 XNUMX oz သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။
R: Las tiendas သည် aprobadas ၏ရင်သွေးဖြစ်သည့် en tamaño correcto ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု 16 ဘုံဘိုင်ယိုဒြပ်စင်၏ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု, စက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှု, စက်ကိရိယာများ, ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အစီအစဉ်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ de compras ။ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သောလှပသောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုများဖြစ်သော incluyendo arroz integral, bulgur, avena, tortillas de maíz, ခေါက်ဆွဲသုံးကွက်ပေါင်းစပ်မှုနှင့် y tortillas de trigo integral ။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအားအကြံဥာဏ်ရယူပါ။
P: Mi hijo es alérgico al gluten, ငါ့ကိုငါ pueden dar en lugar de pan?
R: Las tortillas de maíz, el arroz ၏အဓိကနှင့် y avena son una alternativa sin gluten ။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သတ်သောအချက်အလက်များအားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
P: ar ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်လား?
R: အလိုအလျှောက်စက်ကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဤအမှုအရာသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော frecuencia en frasas y verduras ဖြစ်သည်။ EBT မှ verano, အဘယ်သူမျှမကdebería estarlo, အဘယ်သူမျှမက aprobado မှတစ်ခုလုံးကို, ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုလုံးကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်။ သင့်အနေဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
P: comp လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်Maní / frijoles / guisantes?
R: တစ် ဦး က cada nño se le autoriza una unadad en la categoría de maní / frijol / guisantes ။
1 libra က de frijoles deshidratados
4 လက္ကရက် frijoles enlatados (4 latas = 1 unidad)
envases / latas, las marcas permidas y los artículos que no se ခွင့်ပြု။ EBT သည် verbal que le ayudaráaencictrar articculos y ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကစျေးဝယ်သည်။
မေးကွမ်းခြံကုန်း EBT က de verano con usar cupones?
R ကို: Puede usar cupones ။ SEBTC ၏အသုံး ၀ င်သောအရာသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ SEBTC ၏အစီအစဉ်အရ“ centavos de descuento” သည်“ cantidad del cupón se descontará del precio que paga el programa” ၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
P: Dollar ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ EBT ၏ verano en todas las tiendas, como ဒေါ်လာအထွေထွေ, tiendas de conveniencia / အမြန်မှတ်နှင့် y otros lugares que မျှestánနှင့်စာရင်းပြုစုစာရင်းပြုစု?
R: WIC ၏လက်ကျန် EBT de verano deben cumplir los reglamentos ။ WIC နှင့် EBT ၏ verano, ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကို perecederos frescos y ကို congelados, ထိုမျှမကသားမရှိသော aprobada အဘယ်သူမျှမ todas las tiendas tienen la variedad က de alimentos ။
ကလေးများများအတွက်နွေရာသီ EBT အဆိုပါ Chickasaw အဘိဓါန်နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။